8K Player For Windows v.4.1.0 ( License Free Giveaway) - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Computer software Giveaway Player 8K Player For Windows v.4.1.0 ( License Free Giveaway)
8K Player For Windows v.4.1.0 ( License Free Giveaway)
Maung Pauk at 4:37:00 PM Computer software, Giveaway, Player,
Video, Audio Format မျိုးစုံကို Play နိုင်တဲ့ 8K Player ဖြစ်ပါတယ်.. Video Resolution မှာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ 8K ကိုတောင် Play နိုင်တာဆိုတော့ကျန်တဲ့ Format တွေ ပြောစရာတောင်မလိုတော့ဘူး.. မိမိကွန်ပျူတာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ Resolution ထဲက အမြင့်ဆုံး Resolution အတိုင်း ရုပ်ထွက်ကောင်းစေမှာပါ.. ဒါ့အပြင် Gif အဖြစ်လည်း ထုတ်ပေးနိုင်သလို Loop လည်း လုပ်နိုင်ပါမယ်.. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အပိုင်းလေးကို bookmark လုပ်ထားနိုင်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အချိန် အဲဒီနေရာကနေ ပြန်ကြည့်လို့လည်း ရပါမယ်..
လိုင်စင်အတွက် ၁ နှစ်စာ လိုင်စင်ကီးကိုလည်း အလကားပေးနေပါတယ်..
https://www.mediadimo.com/free-video-player လင့်ကိုသွားပြီး အီးမေးဖြည့်. Get License Code ကိုနှိပ်တာနဲ့ တရားဝင်လိုင်စင်တစ်ခု ရရှိမှာပါ..
Video, Audio Format မြိုးစုံကို Play နိုငျတဲ့ 8K Player ဖွဈပါတယျ.. Video Resolution မှာ အမွငျ့ဆုံးဖွဈတဲ့ 8K ကိုတောငျ Play နိုငျတာဆိုတော့ကနျြတဲ့ Format တှေ ပွောစရာတောငျမလိုတော့ဘူး.. မိမိကှနျပြူတာနဲ့ကိုကျညီတဲ့ Resolution ထဲက အမွငျ့ဆုံး Resolution အတိုငျး ရုပျထှကျကောငျးစမှောပါ.. ဒါ့အပွငျ Gif အဖွဈလညျး ထုတျပေးနိုငျသလို Loop လညျး လုပျနိုငျပါမယျ.. ကိုယျကွိုကျတဲ့အပိုငျးလေးကို bookmark လုပျထားနိုငျပွီး ကိုယျကွိုကျတဲ့အခြိနျ အဲဒီနရောကနေ ပွနျကွညျ့လို့လညျး ရပါမယျ..
လိုငျစငျအတှကျ ၁ နှဈစာ လိုငျစငျကီးကိုလညျး အလကားပေးနပေါတယျ..
https://www.mediadimo.com/free-video-player လငျ့ကိုသှားပွီး အီးမေးဖွညျ့. Get License Code ကိုနှိပျတာနဲ့ တရားဝငျလိုငျစငျတဈခု ရရှိမှာပါ..
Computer software, Giveaway, Player
Computer software Giveaway Player